HL-L6400DW | Brother Myanmar
အိမ်သုံး Printers များနှင့် ဘက်စုံသုံး Printers များ
အနီးကပ်ရုံနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်(NFC) Card Reader၊ စာရွက်ရွေးချယ်အတည်ပြုပေးနိုင်တဲ့နည်းပညာ မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးကို အလိုအလျောက် print ထုတ်နိုင်ပြီး Gigabit ကွန်ယက်စနစ်နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် အလွန်မြန်နှုန်းမြင့် အဖြူအမည်း Laser printer ကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့အလုပ်တွေကို ပိုတွင်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။
Product Brochure (PDF/1.14MB)
အသင့်ပါဝင်သည့် အနီးကပ်ရုံချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ NFC Card Reader စနစ်၊ Gigabit ကွန်ယက်စနစ် နှင့် ကြိုးမဲ့စနစ်
၅၀/၅၂ ppm အထိ (Quiet Mode: ၂၅/၂၆ ppm အထိ) အမြန်နှုန်း
၁၂၀၀ × ၁၂၀၀ dpi အထိမြင့်မားတဲ့ ပုံအရည်အသွေး
များစွာ print ထုတ်နိုင်တဲ့မှင်တောင့်
ကောင်းမွန်တဲ့ print အရည်အသွေး
400 mm x 396 mm x 288 mm
(For models without the lever on the 2-sided tray)
(For models with the lever on the 2-sided tray)
Select the paper size you want to use by sliding the 2-sided lever: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
1.8" TFT Color LCD
Approx. 12,000 pages in accordance with ISO / IEC 19752
Approx. 20,000 pages in accordance with ISO / IEC 19752)
Optional Output Tray
(Mailbox) Max 800 pages